တရုတျခွံဘေးက မွကှေကျကလေးမြား – Kyaw Zaw Oo's Blog
August 6, 2021 August 6, 2021 web_master
၁၉၅၀-၅၃ ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်စစ်ပွဲကို မှတ်မိသလောက် အကျဉ်းချုပ်ပြောရမည်ဆိုလျှင် – ဆိုဗီယက် ခေါင်းဆောင် စတာလင်၏ အားပေးအေားမြှောက်ပြုမှုလက်ချက်ဖြင့် မြောက်ကိုးရီးယားတပ်များသည် နယ်ခြား (၃၈) မျဉ်းပြိုင်ကို ကျော်နင်းလျက် ရုတ်တရက် ကျူးကျော် ၀င်ရောက်လာသည်။ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ် တောင်ဖက်အစွန်ဆုံးနားအထိ တောင်ကိုးရီးယားကျုံ့သွားသည်။ ကုလသမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်သော UN စုပေါင်းတပ်များသည် တောင်ကိုးရီးယားဘက်မှ ၀င်တိုက်သည်။ (ထိုစဉ်က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် တရုတ်ထိုင်ခုံ၌ ကွန်မြူနစ် ပြည်မ တရုတ်ပြည်ကို ထိုင်ခွင့်မပေးဘဲ ထိုင်ဝမ်ကို ထိုင်ခွင့်ပြုထားသဖြင့် ဆိုဗီယက်က အစည်းအဝေးများကို သပိတ်မှောက်ထားသည်။) အမေရိကန်-UN စုပေါင်းတပ်များက မြောက်ကိုးရီးယားတပ်များကို တိုက်ယင်းတိုက်ရင်း မြောက်ဘက်သို့ တွန်းတင်သွားရာ မြောက်ကိုးရီးယားတပ်များ တဖြည်းဖြည်း တရုတ်နယ်စပ်နား ရောက်သည်အထိ ဆုတ်ခံရသည်။
တရုတ်နယ်စပ်နားသို့ အမေရိကန်တပ်များချဉ်းကပ်လာသည့်အခါ ရုတ်ချဉ်းဆိုသလို တရုတ် ကွန်မြူနစ် တပ်များက နယ်စပ်ကိုကူးလာ၍ မြောက်ကိုးရီးယားဘက်က ၀င်တိုက်သည်။ တရုတ်ဘက်က အသေအပျောက် အလွန်များသော်လည်း အမေရိကန်-UN တပ်ပေါင်းစုသည် ယခင် နယ်ခြား (၃၈) မျဉ်းပြိုင်ရှိရာသို့ တဖြည်းဖြည်း ပြန်ဆုတ်လာကြရသည်။ ထို့နောက် နောက်ပိုင်း မတိုးသာမဆုတ်သာ ကာလအတွင်း တရုတ်တပ်များသည် တရုတ်ပြည်အတွင်းသို့ တသုတ်ပြီးတသုတ် ပြန်ဆုတ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ (၃၈) မျဉ်းပြိုင်သည် တောင် နှင့် မြောက် ကိုးရီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား de facto နယ်ခြားမျဉ်း ဖြစ်နေခဲ့သည်မှာ ယနေ့ထက်ထိဖြစ်လေသည်။
အနှစ်တစ်ရာလောက် ဂျပန်ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခများကို အဆုံးသတ်ပြီး အနိုင်ရသူ နိုင်ငံကို ပေါင်းစည်းနိုင်သူအဖြစ် ၁၆-ရာစုတွင် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သော ဂျပန်စစ်သူကြီး တိုယိုတိုမိ ဟိဒဲယိုရှိ (Toyotomi Hideyoshi) သည် တရုတ်ပြည်ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန်အတွက် စစ်ရေးပြင်ဆင်ပြီးနောက် ကိုးရီးယားဘုရင်ထံသို့ လှမ်း အကြောင်းကြားသည်။ သူ၏တရုတ်ပြည်ကို ၀င်တိုက်မည့် စီမံကိန်းကြီးကို ပြောပြလျက် တရုတ်ပြည်အား ၀င်တိုက်ရာတွင် ပါဝင်ပူးပေါင်းရန် ဖိတ်ခေါ်သည်။
ကိုးရီးယားဘုရင် ရှင်းဂျိုးကငြင်းပယ်သည့်အခါ ဟိဒဲယိုရှိသည် သူ၏စီမံကိန်းကို မပြောင်းလဲဘဲ ကိုးရီးယားကို စတိုက်သည်။ ကိုးရီးယားပြည်ကို ဂျပန်တပ်များ တိုက်ခိုက်နေစဉ် တရုတ် မင် မင်းဆက် ဧကရာဇ် ၀မ်လိ (Wanli) က လက်ပိုက်ကြည့်မနေတော့ဘဲ ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်သို့ တရုတ်တပ်များစေလွှတ်ကာ ကိုးရီးယားများဘက်မှ ၀င်တိုက်စေသည်။ ဓနအင်အားဖြင့်လည်း စစ်ပွဲကို ကိုးရီးယားများဘက်က ကူညီသည်။ ကနဦးအင်အား တစ်သိန်းခွဲခန့်ဖြင့် ဟိဒဲယိုရှိ ဦးဆောင်သော ဂျပန်တပ်များသည် ၁၅၉၂-ခုနှစ်မှ ၁၅၉၈-ခုနှစ်အတွင်း နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်ကို လုပ်ကြံသော်လည်း ကိုးရီးယား နှင့် တရုတ် ပူးပေါင်းတပ်များကို မနိုင်နိုင်ခဲ့ပေ။ ၁၅၉၈-ခုနှစ်တွင် ဟိဒဲယိုရှိ ကွယ်လွန်သောအခါ ဂျပန်တပ်များ ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်မှ ဆုတ်ခွာလာခဲ့ကြသည်။
ဟင်နရီကစ်ဆင်းဂျား က သူ၏ World Order (ကမ္ဘာနိုင်ငံများ၏ အခင်းအကျင်း) စာအုပ်တွင် ဟိဒဲယိုရှိ၏ ၁၆-ရာစု ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်ကျူးကျော်မှု အကြောင်းကို ရေးသားရင်း မှတ်ချက်ပြုသည်မှာ – ၁၆-ရာစု ကိုးရီးယားပြည်ကို ဂျပန်ဝင်တိုက်သည့် စစ်ပွဲတွင် တရုတ်ဝင်ကူတိုက်သည့်အကြောင်းကို အသေအချာ ထည့်တွက်မိခဲ့သည်ဆိုပါက ၂၀-ရာစု ကိုးရီးယားစစ်ပွဲတွင် အမေရိကန်တို့၏ ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုမှာ မတူကွဲပြားသောပုံစံဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့နိုင်ဖွယ်ရှိသည် ဟု သူက ဆိုပါသည်။ “ . . . , if heeded, might have changed America’s conduct in the twentieth-century Korean War.”
[လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံရေးမှတ်စုတိုများ (၈)]
၁၉၅၀-၅၃ ကိုးရီးယားကြှနျးဆှယျစဈပှဲကို မှတျမိသလောကျ အကဉျြးခြုပျပွောရမညျဆိုလြှငျ – ဆိုဗီယကျ ခေါငျးဆောငျ စတာလငျ၏ အားပေးအေားမွှောကျပွုမှုလကျခကျြဖွငျ့ မွောကျကိုးရီးယားတပျမြားသညျ နယျခွား (၃၈) မဉျြးပွိုငျကို ကြျောနငျးလကျြ ရုတျတရကျ ကြူးကြျော ဝငျရောကျလာသညျ။ ရကျပိုငျးအတှငျး ကိုးရီးယားကြှနျးဆှယျ တောငျဖကျအစှနျဆုံးနားအထိ တောငျကိုးရီးယားကြုံ့သှားသညျ။ ကုလသမဂ်ဂ ဆုံးဖွတျခကျြဖွငျ့ အမရေိကနျခေါငျးဆောငျသော UN စုပေါငျးတပျမြားသညျ တောငျကိုးရီးယားဘကျမှ ဝငျတိုကျသညျ။ (ထိုစဉျက ကုလသမဂ်ဂ လုံခွုံရေးကောငျစီတှငျ တရုတျထိုငျခုံ၌ ကှနျမွူနဈ ပွညျမ တရုတျပွညျကို ထိုငျခှငျ့မပေးဘဲ ထိုငျဝမျကို ထိုငျခှငျ့ပွုထားသဖွငျ့ ဆိုဗီယကျက အစညျးအဝေးမြားကို သပိတျမှောကျထားသညျ။) အမရေိကနျ-UN စုပေါငျးတပျမြားက မွောကျကိုးရီးယားတပျမြားကို တိုကျယငျးတိုကျရငျး မွောကျဘကျသို့ တှနျးတငျသှားရာ မွောကျကိုးရီးယားတပျမြား တဖွညျးဖွညျး တရုတျနယျစပျနား ရောကျသညျအထိ ဆုတျခံရသညျ။
တရုတျနယျစပျနားသို့ အမရေိကနျတပျမြားခဉျြးကပျလာသညျ့အခါ ရုတျခဉျြးဆိုသလို တရုတျ ကှနျမွူနဈ တပျမြားက နယျစပျကိုကူးလာ၍ မွောကျကိုးရီးယားဘကျက ဝငျတိုကျသညျ။ တရုတျဘကျက အသအေပြောကျ အလှနျမြားသျောလညျး အမရေိကနျ-UN တပျပေါငျးစုသညျ ယခငျ နယျခွား (၃၈) မဉျြးပွိုငျရှိရာသို့ တဖွညျးဖွညျး ပွနျဆုတျလာကွရသညျ။ ထို့နောကျ နောကျပိုငျး မတိုးသာမဆုတျသာ ကာလအတှငျး တရုတျတပျမြားသညျ တရုတျပွညျအတှငျးသို့ တသုတျပွီးတသုတျ ပွနျဆုတျသညျ။ ထိုအခြိနျမှစ၍ (၃၈) မဉျြးပွိုငျသညျ တောငျ နှငျ့ မွောကျ ကိုးရီးယား နှဈနိုငျငံအကွား de facto နယျခွားမဉျြး ဖွဈနခေဲ့သညျမှာ ယနထေ့ကျထိဖွဈလသေညျ။
အနှဈတဈရာလောကျ ဂပြနျပွညျတှငျး ပဋိပက်ခမြားကို အဆုံးသတျပွီး အနိုငျရသူ နိုငျငံကို ပေါငျးစညျးနိုငျသူအဖွဈ ၁၆-ရာစုတှငျ ပျေါထှနျးလာခဲ့သော ဂပြနျစဈသူကွီး တိုယိုတိုမိ ဟိဒဲယိုရှိ (Toyotomi Hideyoshi) သညျ တရုတျပွညျကို တိုကျခိုကျသိမျးပိုကျရနျအတှကျ စဈရေးပွငျဆငျပွီးနောကျ ကိုးရီးယားဘုရငျထံသို့ လှမျး အကွောငျးကွားသညျ။ သူ၏တရုတျပွညျကို ဝငျတိုကျမညျ့ စီမံကိနျးကွီးကို ပွောပွလကျြ တရုတျပွညျအား ဝငျတိုကျရာတှငျ ပါဝငျပူးပေါငျးရနျ ဖိတျချေါသညျ။
ကိုးရီးယားဘုရငျ ရှငျးဂြိုးကငွငျးပယျသညျ့အခါ ဟိဒဲယိုရှိသညျ သူ၏စီမံကိနျးကို မပွောငျးလဲဘဲ ကိုးရီးယားကို စတိုကျသညျ။ ကိုးရီးယားပွညျကို ဂပြနျတပျမြား တိုကျခိုကျနစေဉျ တရုတျ မငျ မငျးဆကျ ဧကရာဇျ ဝမျလိ (Wanli) က လကျပိုကျကွညျ့မနတေော့ဘဲ ကိုးရီးယားကြှနျးဆှယျသို့ တရုတျတပျမြားစလှေတျကာ ကိုးရီးယားမြားဘကျမှ ဝငျတိုကျစသေညျ။ ဓနအငျအားဖွငျ့လညျး စဈပှဲကို ကိုးရီးယားမြားဘကျက ကူညီသညျ။ ကနဦးအငျအား တဈသိနျးခှဲခနျ့ဖွငျ့ ဟိဒဲယိုရှိ ဦးဆောငျသော ဂပြနျတပျမြားသညျ ၁၅၉၂-ခုနှဈမှ ၁၅၉၈-ခုနှဈအတှငျး နှဈကွိမျတိုငျတိုငျ ကိုးရီးယားကြှနျးဆှယျကို လုပျကွံသျောလညျး ကိုးရီးယား နှငျ့ တရုတျ ပူးပေါငျးတပျမြားကို မနိုငျနိုငျခဲ့ပေ။ ၁၅၉၈-ခုနှဈတှငျ ဟိဒဲယိုရှိ ကှယျလှနျသောအခါ ဂပြနျတပျမြား ကိုးရီးယားကြှနျးဆှယျမှ ဆုတျခှာလာခဲ့ကွသညျ။
ဟငျနရီကဈဆငျးဂြား က သူ၏ World Order (ကမ်ဘာနိုငျငံမြား၏ အခငျးအကငျြး) စာအုပျတှငျ ဟိဒဲယိုရှိ၏ ၁၆-ရာစု ကိုးရီးယားကြှနျးဆှယျကြူးကြျောမှု အကွောငျးကို ရေးသားရငျး မှတျခကျြပွုသညျမှာ – ၁၆-ရာစု ကိုးရီးယားပွညျကို ဂပြနျဝငျတိုကျသညျ့ စဈပှဲတှငျ တရုတျဝငျကူတိုကျသညျ့အကွောငျးကို အသအေခြာ ထညျ့တှကျမိခဲ့သညျဆိုပါက ၂၀-ရာစု ကိုးရီးယားစဈပှဲတှငျ အမရေိကနျတို့၏ ပွုမှုဆောငျရှကျမှုမှာ မတူကှဲပွားသောပုံစံဖွငျ့ ဆောငျရှကျခဲ့နိုငျဖှယျရှိသညျ ဟု သူက ဆိုပါသညျ။ “ . . . , if heeded, might have changed America’s conduct in the twentieth-century Korean War.”
[လူငယျမြားအတှကျ နိုငျငံရေးမှတျစုတိုမြား (၈)]
Previous နိုငျငံသားတဈဦးခငျြး အခွခေံသဘာဝ အခှငျ့အရေးမြား (Bill of Rights)
Next ယဉျကြေးမှုမြား ထိပျတိုကျတိုးခွငျး